GitKraken: sangana nechinhu ichi chinonakidza chevagadziri | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri mugadziri uye iwe uchishanda kazhinji nemasevhisi akaita seGitHub, GitLab, nezvimwe, saka unoziva kuti pane mamwe matanho anogona kumbogumbura. Pane kudaro, kune zvinonakidza zvishandiso zvinogona kukubatsira iwe pazuva nezuva-zuva hwaro, senge GitKraken.
Iyi app ine graphical interface yekugadzirisa ako mapurojekiti, uye yatove kushandiswa nevazhinji vanozivikanwa vanogadzira uye kunyange makambani seNetflix, Tesla neApple. Imwe nzira yekuve neushamwari hub ye software Git vhezheni maneja, uye saka zvakare nezve masevhisi ataurwa pamusoro ...
Ehezve, iri zvachose yemahara, kunyangwe yakabhadhara vhezheni zvakare, uye inowanikwa yeLinux, kuwedzera kune Windows uye macOS. Zviripachena, iyo yemahara vhezheni ichave inopfuura yakaringana kune vakawanda vakazvimirira vanogadzira, asi mamwe makambani angangoda izvo zvekuwedzera zveiyo yakabhadharwa vhezheni.
Nenzira iyi iwe unozogona kudzivirira maitirwo mune mameseji maitiro eako Git account uye enda mberi nekuita zvimwe zvese zvimwe inokurumidza uye inonzwisisika neGUI. Kubva pairi unogona kuita kuwanda kwezvinhu. Pakati pezvakakosha maficha eGitKraken ndeaya:
Unogona kuve nemaprofayera akawanda.
Iyo inosangana zvisina musono neGitHub Enterprise, GitLab (ese akabatwa uye asina-kuitirwa), Bitbucket, uye VSTS.
Mupepeti kuti ugone kuona matavi, kubatanidzwa, kuita nhoroondo.
Kugona kumisikidza rima modhi.
Nyore maererano nekubatanidzwa, kufashukira uye Push zviito. Iyo zvakare inotsigira kugadzira, kuumbiridza, uye kuwedzera zvinyorwa zviri kure, pamwe nekutarisa nekugadzira zvikumbiro zvekudhonza
Iwe unogona kuvhura zororo, kuseta zvido zvako, kuronga zvigadzirwa zvako nemapoka, nezvimwe.
Inosanganisira yakavakirwa-mukati kodhi mhariri yekugadzirisa mafaira zvakananga kubva pairi. Iwe unogona kunyange kushandisa diff kuti uone misiyano mukodhi, uye ine inokwanisa kusimudzira zvinyorwa, kutsvaga, nezvimwe.
Iwe unogona zvechokwadi kushandisa Gitflow, Git Hooks, LFS, uye submodules.
Iwe uchawana chirongwa ichi mune zororo reanonyanya kufarirwa ma distros, saka unogona riise nyore nemapakeji manejimendi maturu (pane zvakare snap uye Flatpak). Iwe unogona zvakare kuisa iyo yepamutemo webhusaiti iyo yandinosiya kumagumo kurodha pasi mamwe mapakeji, uye iwe unogona kutomboiwana iyo mune mamwe maapplication ezvitoro ...
Mamwe mashoko - GitKraken Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » GitKraken: sangana nechinhu ichi chinonakidza chevagadziri
WINE 6.0-rc3 ikozvino yavapo, paine zvigadziriso zvishoma zvezvinhu zvinotonhora